Uku ndiko kutsigirwa kweApple Watch kubva kuNiutop | Ndinobva mac
Uku ndiko kutsigirwa kweApple Watch kubva kuNiutop
Dzinodarika mwedzi miviri dzakasiirwa iyo inofungidzirwa nyowani Apple Watch inosvika pamaoko edu kana kuti ndizvo zvainofungidzira kuti inoisa mukumirira. Zvinoenderana nezvinyorwa, Zvinotaridza kuti padhuze neiyo iPhone 7 chizvarwa chechipiri Apple Watch yaizosvikawo.
Kana iwe uri kufunga nezve kutora icho chinofungidzirwa chechipiri-chizvarwa kushamisika, iwe unogona kugadzirira uye kutenga rutsigiro rwuri kune iro basa. Isu tinogara tichiongorora musika uye tichitsvaga sarudzo izvo zvinogona kuve pakakwirira kwemahomwe ese uye izvo zvinosangana nehuremu hwemhando.
Mune ino kesi isu tichataura nezve a Niutop brand rutsigiro kuti zvechokwadi uchada. Iyo inotsigira-in-one rutsigiro uye ndeyekuti panguva imwechete inoshanda sekutsigira Apple Watch, unogona zvakare kuwana iyo iPhone. Chinhu chakakosha cheiyo modhi yekutsigira ndechekuti inogadzirwa nealuminium inogoneswa mu rose rose kupedzisa, saka inowirirana neApple Watch uye iyo iPhone inogadzirwa mune iro vara.
Rutsigiro harwuuye rwakajairika nekambani yeinduction iyo inodikanwa kuisazve Apple Watch, saka tisati tamboishandisa isu tichafanirwa kusanganisira zvese Apple Watch tambo uye iyo iPhone tambo. Muchikamu chezasi chayo silicone bhandi yakarongedzwa iyo inoita kuti igadzikane kwazvo patafura.
Kana riri bumbiro rayo, rinotendera iyo iPhone kuti ive neicho chaicho kukwanisa kuita vhidhiyo kufona neFaceTime uye kuti isu hatifanire kutora foni kubva kumubati. Mutengo wayo ndeye 40,99 euros uye iwe unogona kuiwana pane iro peji ratinobatanidza kune.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Uku ndiko kutsigirwa kweApple Watch kubva kuNiutop
Kana uremu uye saizi zvichikosha kwauri, iyi ndiyo yekupedzisira SSD yeMacBook yako
Yechishanu Apple Apple Chitoro ichavhura muna Chikumi 30